ukulungiswa Ngaphakathi | Etimnga 2021
Isoftware yokuCwangciswa kweGumbi lokulala eli-10 eliSimahla (lasimahla kunye neNtlawulo)
Isoftware yokuyila yasimahla ye-10 yasimahla kunye nehlawulelweyo yokunceda ukuyila eyona nto iphambili. Ezi nkqubo zikuvumela ukuba uhambise ifanitshala, utshintshe umbala wepeyinti kwaye ungeze umhombiso kuyilo lwakho.
Isoftware ePhambili yeKhitshi yoYilo lweKhabhinethi eyi-17 (yasimahla kunye nehlawulelweyo)
Fumana izixhobo zekhompyuter eziphambili zekhitshi ezili-17 zokulungisa ngokutsha okanye ukuyila kwakhona indawo yakho. Ezi nkqubo zasekhitshini zasimahla nezihlawulelweyo zinokukunceda ukuba uhlengahlengise kwakhona ..
Fumana eyona software yasimahla yoyilo lwangaphakathi ukwenza indawo yakho yoyilo kunye noyilo lwasekhaya. Ezi nkqubo zasimahla zesoftware yoyilo lwangaphakathi ziyile
Isikhokelo seyona software ingcono yoyilo lwe-21 ikhabethe kubandakanya isimahla, ihlawulwe, i-3D, iiapps kunye neenkqubo ezikwi-Intanethi. Yila ikhabethe yokungena kwaye ufumane izimvo zokugcina.
I-Ceramic tile flooring pros and cons and design guide ukukunceda ukuba uthathe isigqibo sokuba ngaba lolu hlobo lomgangatho luphambili ekuyilweni kwangaphakathi kwekhaya lakho.
I-Porcelain Wood Tile Pros and Cons
I-porcelain iinkuni zokwenza okuhle Jonga ukuba ukhuni lujongwa njani ngeplasta yaphantsi kwethayile kulungele ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela.
I-Curb inyuswe vs ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni
Isikhokelo sokunqanda ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni kunye nolwahluko phakathi kwezi ntlobo zimbini. Jonga ukuba ukubetheka okanye ukukhanya kwesibhakabhaka esibhakabhakeni kulungile.
Imiphezulu yeetafile yeGranite (Isikhokelo sokugqibela)
Fumanisa ukuba kutheni imiphezulu yeetafile zegranite ziqhubeka nokukhula ngokuthandwa ekhitshini. Izixhobo zokubala zeGranite zihle, zihlala ixesha elide kwaye zinemibala eyahlukeneyo onokukhetha kuyo. Ingaba uthenga ikhaya elitsha okanye ulungisa kwakhona, i-granite iyaqhubeka ifunwa kakhulu emva kwezinto zokubala eziqhubeka zikhula ekuthandeni.
Iingcamango zeSihlalo seWindows ezingama-55 (iibhentshi, ukuGcina kunye neeCushion)
Ezi zimvo zezihlalo zefestile zinokukunceda ukuguqula indawo ephantsi kwefestile yakho ukuya kwindawo entle yokuphumla. Fumana imibono yoyilo lwezihlalo zefestile ukuze ufumane inkangeleko abayifunayo.
Imibono yoMgangatho weKhitshi kuHlahlo-lwabiwo mali
Fumana ezona zimvo ziphambili zomgangatho wasekhitshini kuhlahlo-lwabiwo mali kubandakanya i-pros & cons kuludwe ngalunye lwezixhobo zangaphantsi. Jonga imifanekiso yexabiso eliphantsi kwikhitshi kunye nokufumanisa ukuba yeyiphi eyona ilungele wena.
Umgangatho woqalo (Iinkonzo kunye neengozi)
Ngaba i-bamboo flooring iyona khetho efanelekileyo kwiprojekthi yakho elandelayo yokulungisa ikhaya? Fumana ezona zizathu zibalaseleyo zokuyisebenzisa kwaye ufumane ubuchule bokwenza i-bamboo kunye neengozi zokuzisebenzisa ..
Isoftware yangaphakathi yoyilo
Ngale software yoyilo yasimahla unokwenza kwaye wenze ngokwezifiso iiprojekthi zakho zasekhaya. Ungasebenzisa umhleli we-Intanethi ukongeza uyilo lwegumbi, uyilo lwangaphakathi, yongeza imibala, ifenitshala, ukukhanya, izinto ezahlukeneyo kunye nokunye. Unokwenza ubeko lwakho kwi-2D okanye kwi-3D kwaye xa ugqibile, bona ...
IBhodi kunye neBatten Wotingcoting (Isikhokelo soYilo)
Ibhodi kunye nesikhokelo sokuyilwa kwesoyile kubandakanya ukuba yintoni na, iintlobo zeenkuni oza kuzisebenzisa, ukuba zide kangakanani kwaye kufuneka zihonjiswe kunye nemibono yokuhombisa eludongeni.
Umgangatho wekhonkrithi opholileyo (Isikhokelo soYilo lokuGcina)
Isikhokelo kumgangatho wekhonkrithi okhazimlisiweyo kubandakanya ukuba yintoni, iindleko kunye neendidi ezahlukeneyo ezinjengamabala, ukugaya kunye nokutywina kunye nokukhazimliswa ngomatshini.
Indlela yokuxuba kunye nokuTshatisa imiphezulu yeetafile zeGranite
Isikhokelo sokuxuba kunye nokuthelekisa imiphezulu yeetafile yegranite enemibala emibini eyahlukeneyo yegranite, izikimu zombala ezithandwayo kunye nendibaniselwano yekhitshi eyahlukeneyo
Umgangatho weMarble (Iingcamango ezintle zoYilo)
Igalari yemibono yoyilo lweemabula kubandakanya imifanekiso yeCarrara, iCalacatta kunye nezinye iintlobo ezidumileyo. Jonga imigangatho yemabhile yezindlu zangasese, iikhitshi, iifoyers kunye nokunye ..
Fumana eyona software yasimahla yoyilo lwangaphakathi ukwenza indawo yakho yoyilo kunye noyilo lwasekhaya. Ezi nkqubo zesoftware ziyilwe simahla ziyile
Eyona mibala yepeyinti efanelekileyo
Jonga imibala yepeyinti efanelekileyo ekhaya lakho. Fumana imibono yepeyinti yokungena kwefoyer kubandakanya neendlela zokutshatisa umbala nefenitshala kunye nokuhombisa.
uthini umahluko phakathi kokuphoswa kunye ne-ms
ilokhwe yomtshato etyheli namhlophe
iikowuti zokuthetha nentombi yakho
ngaba ucebisa umfoti wakho womtshato
Ngubani igama eliya kuqala kwisimemo somtshato